भोलि साउन २१ गते कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/भोलि साउन २१ गते कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
8112minutes read
सामाजिक कार्यमा व्यस्त रहनुहुनेछ। खर्चामा वृद्धि हुनेछ। नयाँ मित्रहरु बन्नेछन्। सरकारी क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। मित्रगणको साथ यात्राको योग बन्नेछ। अग्रजको भरपूर सहयोग प्राप्त हुनाने मन प्रशन्न रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ।
तपाईंको लागि यस दिन शुभ फलदायी रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तथा सहकर्मीको भरपूर सहयोग मिल्नेछ साथै पदोन्नतिको योग रहेको छ। मित्रगणसँगको भेटघाटले दिन आनदमय हुनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय र आनन्दमय वातावरण रहनेछ।
तपाईंको लागि यस दिन प्रतिकूल रहन सक्छ। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ। कार्य गर्ने उत्साह कम हुनेछ। कर्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तथा सहकर्मीसँग मतभेदको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। अत्याधिक खर्च हुनाले आर्थिक पक्ष कमजोर हुनेछ। सन्तान सम्बन्धि कुराले मन चिन्तित रहनेछ।
मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। आफ्नो क्रोधमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ। अत्याधिक खर्च हुनेछ। परिवारका सदस्यका साथ मतभेद हुनसक्छ। नयाँ कार्य यस दिन सुरु नगर्नुहोला। सरकारी क्षेत्रमा समय अनुकूल छैन। वैचारिक रूपले नकारात्मकता छाउनेछ।
तपाईं वा तपाईंको जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ, सतर्क रहनुहोला। दाम्पत्य जीवनमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। मनमा नकारात्मक सोच उत्पन्न हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ मतभेद हुनसक्छ। सामाजिक क्षेत्रमा अनावश्यक समय खर्च हुनसक्छ। मनमा उदासिनता छाउनेछ।
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण कायम रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्।
कडा परिश्रम पश्चात पनि अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त नहुँदा मन चिन्तित रहनेछ। तपाईंको बोली र स्वभावले मानिस प्रभावित हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। खान-पानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। साहित्य तथा लेखन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ।
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनाले मन चिन्तित रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ। धनहानि हुने सम्भावना रहेको छ। आफन्तजनको साथ मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। पारिवारिक वातावरण आनन्दमय रहनेछ। मनमा प्रशन्नताको अभाव महशुस हुनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय शुभ रहेको छ। आफन्तजनको साथमा आनन्दमय रूपले समय बित्नेछ। मित्रगण तथा आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर मिल्नाले मन प्रशन्न रहनेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। अध्यात्मको आनन्द तपाईंको जीवनमा रहनेछ।
तपाईंको लागि यस दिन प्रतिकूल रहनेछ। परिवारको सदस्यका साथ मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। आनवश्यक खर्च हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अनुकूल छैन। आर्थिक कारोबार यस दिन नगरेकै राम्रो होला। मनमा ग्लानिको भावना रहिरहनेछ।
परिवारमा आनन्दमय वातावरण कायम रहनेछ। मित्रगण तथा परिवारका साथ आनन्दपूर्वक समय बित्नेछ। यात्राको योग बन्नेछ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। वैचारिक रूपले नकारात्मकता छाउनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ। परिवारको सदस्यका साथ मतभेद हुन सक्छ। लेन-देनको लागि समय उत्तम रहेको छैन। धनहानि हुने सम्भावना रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीसँग मनमुटाव हुनसक्छ। अपेक्षाकृत सफलता नमिल्दा मन चिन्तित रहनेछ।
बिहानै सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।
मनकामना मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् । जेठ ७ बुधबार
बिहनै सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् ।